Hamilton Masakadza to retire from international cricket after T20I tri-series | CricMain
by Cric Editor September 3, 2019, 4:04 pm 1.1k Views
Business Standard – Zimbabwe skipper Hamilton Masakadza will be retiring from international cricket after the conclusion of the upcoming T20I series against Bangladesh and Afghanistan, Zimbabwe Cricket confirmed on Tuesday.
Zimbabwe skipper Hamilton Masakadza will be retiring from international cricket after the conclusion of the upcoming T20I series against Bangladesh and Afghanistan, Zimbabwe Cricket confirmed on Tuesday.
“BREAKING: @ZimCricketv captain Hamilton Masakadza has announced he will be retiring from all forms of international cricket after the T20I tri-series in Bangladesh #ThankYouHami #Legend,” Zimbabwe Cricket tweeted.
Masakadza has played 38 Tests, 209 ODIs and 62 T20Is for Zimbabwe.
Earlier this year, the ICC had decided to suspend Zimbabwe Cricket with immediate effect for failing to fulfil their obligation of ensuring that there is no government interference in its administration.
The tri-series involving Zimbabwe, Bangladesh and Afghanistan is slated to begin from September 13.
Previous article The Ashes odds ahead of England’s fourth Test match against Australia
Next article From selfies to starting sides
From selfies to starting sides